Nepali X Khabar: नायीका सौजन्य सुब्बाको सेक्स भीडियो सार्वजनिक !
नायीका सौजन्य सुब्बाको सेक्स भीडियो सार्वजनिक !
बिनाको जीवन, सासबिनाको धडकन, म कसरी सहुँ’…..बोलको गीतमा हिरो रोज राणा र हिरोइन सौजन्य सुब्बाले बिछोडको आँसुसँगै राम्रै प्रेमालाप गरे । तर यो फिल्मी दृष्य एउटा दुःखद् इतिहासमा सिमित भएको छ ।
पतिसँग सम्बन्ध बिच्छेद गरेर लामो समय रोज राणासँगको प्रेममा रमाएकी नायिका सौजन्य सुब्बाले यतिखेर तिनै रोजबिरुद्ध प्रहरीमा सार्वजनिक मुद्दा दायर गरेकी छिन् ।अघिल्लो साता फिल्मी बजारमा हिरोइन सुब्बाको सेक्स भिडियो सार्वजनिक भएको चर्चा चल्यो । कतिपय फिल्मी पत्रकारलाई फोन गरेर रोजले नै सौजन्यको सेक्स भिडियो बाँडेको बताइएको थियो । त्यसको पुष्टी हुनेगरि अहिले सुब्बाले ललितपुर प्रहरीमा सार्वजनिक अपराधको मुद्दा दायर गरेपछि यो मामिला सार्वजनिक भएको छ । सौजन्यको पक्षमा पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दका छोरा एवं फिल्मी हिरो भूपेन्द्र चन्दले दबाब दिइरहेको सोमबार प्रकाशित साँघु साप्ताहिकले छापेको छ ।
राणा र सुब्बावीच लामो समय प्रेम सम्बन्ध रहेको र हाल चन्दसँग प्रेमसम्बन्ध रहेको फिल्मी क्षेत्रमा चर्चा छ । टेलि फिल्मबाट नाम कमाएकी सुब्बाले काम पाउन छाडेपछि रोजले केही फिल्ममा लिड रोल दिएका थिए । तर अहिले रोजले आफुलाई डेरामै आएर मार्ने धम्की दिएको भन्दै सुब्बाले प्रहरी गुहारेकी छिन् । सौजन्यले बिहेका लागि रोजलाई दबाब दिएपनि नमानेपछि केही समयदेखि उनीहरुवीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण रहेको ललितपुर प्रहरी परिसरका एक अधिकृतले बताए ।
प्रहरीका अनुसार सौजन्यले दुई बर्षदेखि नै बिबाहका लागि दबाब दिँदै आएकी थिइन् । तर रोजले भने पाँच बर्षअघि नै बिबाह गर्न नसक्ने बताइसकेका थिए । बिबाह नगर्ने भए दुई करोड रुपैयाँ दिन सौजन्यले माग गरिन् । तर रोजले दुई करोड नदिने भएपछि उनीहरुवीच दरार सुरु भएको थियो । त्यसक्रममा सौजन्यले आफुसँग यौन सम्बन्ध राख्दै गरेको भिडियो सुरक्षित भएको भन्दै रोजलाई धम्क्याएकी थिइन् । रोज पनि के कम उनले पनि आफुसँग पनि भिडियो भएको र त्यो सार्वजनिक गरिदिने धम्की दिए । सौजन्यले प्रहरीमा सार्वजनिक अपराधको मुद्दा दायर गरेपछि अहिले प्रहरीले रोजलाई खोजीरहेको छ । तर तिहार मनाउन दाङतिर गएका कारण नभेटिएको बताइएको छ ।
प्रहरीले यो मामिलामा दुवै पक्षबाट कमजोरी भएको बताएको छ । दुवैवीच मिलापत्र नभएमा प्रहरीले केही दिनभित्रै रोजबिरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारी गरेको साँघु साप्ताहिकले छापेको छ ।
Posted by Lama Babu at 16:03